छुट्टा-छुट्टै दुर्घटनामा ढोरपाटन-२ सेरा र निसीखोला-६ मा दुईको मृत्यु, १ घाईते ! – ebaglung.com
२०७६ आश्विन २२, बुधबार १९:५५	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
छविलाल पाण्डे बुर्तिवाङ २०७६ असोज २२ । ढोरपाटन नगरपालिका र निसीखोला गाउँपालिकामा गरी छट्टाछुट्टैै घटनामा दुईजनाको ज्यान गएको छ । वडा दशैको दिन मँगलबार दिँउसो अबिरल बर्षासहित परेको चट्याङका कारण निसीखोला गाउँपालिका वडा नं.६ मा ६४ बर्षिय धनलाल घर्तीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ ।
घरमा बसिराखेको अवस्थामा परेको चट्याङ्गका कारण उनको ज्यान गएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिबाङले जनाएको छ ।
त्यसैगरी ढोरपाटन नगरपािलका वडा नं.२ सेराका ६५ बर्षिय दलबहादुर थापा गत असोज १९ गतेदेखि हराएको अवस्थामा बुधबार स्थानीयले नर्सिङ्कोट सामुदायिक वनमा शव फेला पारेका छन् । नर्सिङ्कोट मेला हेर्ने भनी गएका थापा बुधबार बिहानसम्म घर नफर्किए पछि खोजीगर्ने क्रममा भीरबाट खसेको अवस्थामा शव फेला परेको बताइएको छ ।
त्यस्तै मँगलबारको चट्याङका कारण निसीखोला गाउँपालिकामा १ जना घाइते भएका छन् । निसीखोला गाउँपालिका वडा नंं ३ घुमाउने भन्ने स्थानमा चट्याङ्ले लागेर २६ बर्षिय दिपक वि.क घाइते भएका छन् ।
यसैवीच एक जना विदेशी अस्ट्रेलियाली पर्यटकलाई घुमाउन लिएर तमान आउदै गर्दा अस्ति राति बुतिवाङ बजार बासबसी भोलिपल्ट विहान बडीगाड खोलाको लक्ष्मीकुण्ड घाटमा रहेको ठेलो जब्रोमा सेल्फि लिँदै गर्दा चिप्लिएर खोलाले बगााएकी महिलकाको शव अझै फेला परेको छैन । घटनाका दिन बिहान बडीगाड खोलामा माछा मार्दै गरेका एक जलारीले निज महिलालाई खोलाले बगाएको देखेको बताएका छ्न् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. भण्डारीको दशैँ बोटे,माझी, कुमालबस्तीमा !